Psychology kunye nesibini-iBezzia | IBezzia
Psychology kunye nesibini
Abasetyhini banamathisela ukubaluleka okukhulu kwinkangeleko yabo, kuba ukongeza ekubeni sempilweni kwaye bomelele ngokwengqondo, bayathanda ukubonakala bebahle. Kodwa ngamanye amaxesha, banokubakho iingxaki zangaphakathi ezenza ukuba lonke ilizwe lomntu liwe: iingxaki zabazali, kunye neqabane, nezifundo, isazisi okanye ubuntu.
Ke ngoko, senze icandelo lezi zihloko, Psychology kunye nesibini, Ngubani oza kuzama ukunceda amantombazana aphethwe zezi ngxaki, asenze sibone izinto mhlawumbi esingazange sizibone ngaphambili. Nangona ikwenza kucace ukuba asingabo oochwephesha bengqondo kwaye ukuba unengxaki yokugula kakhulu kufuneka uye kolu hlobo lobuchwephesha, eBezzia siza kukunika iingcebiso eziza kukunceda ujongane nale meko.
Siza kujongana nale micimbi ngendlela elungileyo: ukuthetha ngendlela esinokuhlala ngayo nosapho lwethu okanye ngendlela yokubonisa ubugcisa bokuloba. Ingaba unomdla?
Ukuzithethelela ngokwesondo kwesi sibini
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iintsuku ze2 .
Unxibelelwano kunye nencoko zibalulekile xa uthetha ngesibini okanye ubudlelwane. Ukuba...
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iintsuku ze6 .
Kule mihla umntu ongenaselfowuni unqabile kakhulu. Enkosi ngayo, kulula kakhulu ukufikelela kuyo ...
Imiqondiso yokuba umntu uyathandana
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iintsuku ze7 .
Uthando yinto engalindelekanga kwaphela kwaye umntu ngamnye usabela kuyo ngokwahlukileyo. Nangona inokuba yinto ...
Ungalubonisa njani uthando kwiqabane lakho
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iveki e-1 .
Ukwazi ukubonisa uthando kwesi sibini kubalulekile xa yonke into isebenza kwaye ...
Uloyiko okanye inqanaba: ungoyisa njani
por USusana godoy yenzayo Iveki e-1 .
Uloyiko lwenqanaba yinto abantu abaninzi abanayo kwaye akukho lula kubo ukuba bajongane nayo….
Iziphumo zokwaphula izithembiso kwesi sibini
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iiveki ze2 .
Ukwenza izithembiso kulula kwaye kulula, nangona kunjalo ingxaki ivela xa bewela ezindlebeni ezingezo ...
Ubulolo obuhamba nesibini
Ngokuqinisekileyo uvile ngaphezu kwesihlandlo esinye malunga nebinzana: "Kungcono ukuba wedwa kunokuba unabantu ababi." Nge…
Ungaluthamba njani uqhawulo-mtshato olubuhlungu
Uqhawulo-mtshato lunokufana nokufa kwaye ngenxa yoko, kufuneka uhambe kwinkqubo ebuhlungu yokoyisa ...
Izilwanyana zasekhaya njengenye yeenkxaso ezinkulu zengqondo
por USusana godoy yenzayo Iiveki ze2 .
Bangabona baphambili kubomi bethu kodwa nakwimpilo yethu. Ngenxa yokuba izilwanyana ziye zaba nye ...
Yintoni uthando oludandathekisayo?
por UMaria Jose Roldan yenzayo Iiveki ze3 .
Uthando oludandathekileyo luhlobo lwentabatheko apho elinye iqela lesibophelelo linengxaki yokuphazamiseka ...
Indlela yokuba liqabane elihlala lihleli
Ukufumana ubudlelwane bokuhlala ngokuhamba kwexesha ayonto ilula ukufezekisa kwaye kufuna ...
Anus okanye mhlophe kwilungu langasese
Ipilisi yolawulo lokuzalwa: izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga
Iipilisi zokulawula inzala
Xa umnqweno wesini ulahlekile ... kufuneka wenze ntoni?
Khala emva kokwenza uthando
Iimpawu ezibonisa ex yakho uxolo yena wamshiya nawe
Umntu athandana naye uba nini?
Ngaba iipilisi zocwangco zithatha umnqweno wesondo?
Ngaba kukho ikamva eluthandweni?
Xa usapho lwam lungamkeli iqabane lam
Iimveliso zobuhle ezinqwenelekayo